I-compact hatchback ene-engine engokwezimali, ene-volume lamitha ayi-1.3 - uLifan Smily. Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi lo modeli kwakuyi-bestseller ka-2011. Kwaqala okokuqala eBeijing eminyakeni emithathu ngaphambili.
Imoto eminyango emihlanu inophahla oluphansi, isimo se-oval of the izibani. Abakhiqizi bakholeka izici ezithile kusukela ku-MINI Cooper. Izilaleli ezibhekiswe kulo mkhakha zingabasebenzi basehhovisi, abaphathi, abanesidingo sokuthenga imoto emothekayo emadolobheni ashisayo. Esigodini sendawo singakwazi ukugibela abagibeli abahlanu, ngakho-ke abashayeli bayabheka njengomkhaya. Isiqu sinomthamo wamalitha angu-300, futhi uma izihlalo ezingemuva zifakwe, khona-ke lesi sibalo sizokhula izikhathi ezingaphezu kwesithathu.
E-Russia, lo mkhiqizo usuphelile u-1.3 litre unit, okuvumela ukuthuthukisa amandla angama-89 l / s. Isivinini esiphezulu singama-155 km / h ukusuka kuLifan Smile. Ukubuyekezwa kwabanikazi bathi le mandla akwanele ukushayela idolobha. Ngesikhathi esifanayo, ukusetshenziswa kwamandla kagesi kungamakhilomitha amane nengxenye ngamakhilomitha ayikhulu. Imoto ifakwe ne-front disc ne-back drum brakes. Ukusabalalisa kahle kwamandla okushisa futhi, ngokulinganayo, ibhalansi yamandla okugqekeza kwenza kube lula ukuziphatha ngokuqiniseka futhi ngokuqinisekile ngesikhathi sokumisa. Umshini we-chrome wokuphatha umnyango kanye ne-radiator grille, kanye nezibuko ezibukwa ngemuva, ezenziwe ngokuqondile emzimbeni womzimba, unike imoto ukubukeka okuyingqayizivele nokungabonakali.
Kukhona ama-nuances ambalwa okumele uwaqaphele ngenkathi ushayela u-Lifan Smily. Ukubuyekezwa kuchaza ukuthi kungenzeka inkinga efana nezibuko zokugeleza. Iqiniso liwukuthi lapho injini iqala, umoya ujikeleza ngekhamera. Ukuze uthathe umoya ovela ngaphandle, kufanele ukhumbule ukucindezela inkinobho. Ngaphezu kwalokho, abanikazi bachaza ukuthi kwenzeke yini inkinga enjalo njengesivinini sokuqala esingashintshi kahle. Ngezikhathi ezinhle ukuthi isitofu sishisa masinyane ingaphakathi lemoto futhi kukhona isimemezelo esimnandi sesikhulumi, esimele umsakazo ezinezikhulumi ezine.
Abathengi baseRashiya banikezwa umenzi wezinsimbi ezimbili eziphelele - DX no-EX Lifan Smily. Ukubuyekeza kubonisa ukuthi kukhona ama- airbags amabili , aklanyelwe umshayeli nomgibeli esihlalweni sangaphambili. Injini ishintshaniswa nesimo sezulu esibandayo saseRussia, kanye nokwelashwa okulwa nokushisa endaweni yokukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, wanezela umoya wokushisa umoya, ukuvala okuphakathi , amasondo ahlangene.
Ithimba labachwepheshe elihlanganisa abantu abangaphezu kwenkulungwane, cishe iminyaka emithathu yakha uLifan Smiley. Ukubuyekeza kugcizelele ukuthi le modeli ingenye yezinga eliphezulu kakhulu emkhakheni wamanani ayo futhi ibonisa izinga eliphezulu lokuthengisa. Naphezu kokulula kwalo moto, abashayeli bayichaza njengokwakheka ngokweqile futhi okulula. Ngesikhathi esifanayo, kukhona ukudlidliza okunamandla kwe-rudder, okuyisici se-injini futhi akuhambisani nokuqedwa.
Ngesikhathi sokuklama, ukunakwa okukhethekile kwakhokhelwa ukuphepha. Le modeli yenziwa ngensimbi enamandla kakhulu. Ukukhiqizwa okuzenzakalelayo komzimba wemoto kwandise amandla awo ngamaphesenti angu-30. Isembozo sokuzivikela senjini sinomsebenzi wokunakekelwa kwamandla kagesi futhi, ngokushaqeka kwamandla, kudilika futhi kuthatha amandla okukhishwa, ngaleyo ndlela kudala ukuvikeleka okwengeziwe kwabagibeli nomshayeli uLifan Smily. Ukubuyekezwa kwabanikazi akuzange kunganaki ukuklanywa kwezihlalo zezingubo, okwaklanyelwe ukucabangela izici zesimanje. Banikeza ukusekelwa okukhululekile kwentamo nenhloko, okhalweni, futhi bajwayele abagibeli kunoma yikuphi ukuphakama nokubala.
Ukuhlakanipha Kumshayeli Ongashadile Othenga Imoto
"Chayzer Toyota": umlando incazelo imodeli
Funny siyakuhalalisela Sasha lokuzalwa
Umuthi "Don": analogue, isenzo
Indlela sifake kwamagoda anyanisi? indlela okunengqondo ukugcina
Yini i-treadmill ngoba indlu kungcono: ukubuyekeza imifanekiso, izici, kanye nokubuyekeza of the inkampani